Iiraan oo 200 oo qof ay ugu geeriyooday Corono Fayras! – Radio Daljir
Iiraan oo 200 oo qof ay ugu geeriyooday Corono Fayras!
Febraayo 29, 2020 10:25 b 0
Hay’adaha caafimaadka ee dalka Iiraan ayaa sheegay in tirada dhimashada dadka uu ku dhacay dhacay Xannuunka ay gaarayso 210 qof, inta badan dadka u dhintay xannuunkani waxa ay kamid yihiin dadka ku nool caasimadda Dahraan iyo magaalada Qum oo laga helay Kiisaskii ugu horreeyey ee Fayraska “Covid-19”.
Tiradan ayaa 6 goor ku jibbaaranta tiradii dadka u geeriyooday Corona Fayras ee ay wasaaradda Caafimaadku shaacisay maalinkii JImcaha taas oo gaareysay 34 qof.
Kiyanosh Jihanibor oo ah af-hayeenka Wasaaradda Caafimaadka ee Iiraan ayaa carrabka ku adkeeyay in tirada dadka u geeriyooday Corona Fayras ay tahay 34 qof, waxa uu ku dhalliilay BBC in ay tahay hay’ad faafisa beenta iyo Wararka aan jirin.
Xubin katirsan Baarlamaan-goboleedka Qum ayaa ku eedeeyey xukuumadda Iiraan in ay qarineysay tirada saxda ah ee dadka u geeriyooday Corona Fayras, Mareykankuna waxa uu sheegay in uu ka welwelsan yahay in Iiraan aanay wada sheegin dhammaan macluumaadka ay hayso.
Wasaaradda Caafimaadka ee Iiraan ayaa goor dhawad ku dhawaaqday geerida ku-xigeenkii Baarlamaanka dalkaasi Muhammad Ali Ramadanan, taasoo tirada dhimashada ka dhigeysa 43 qof, tirada dhaawacana 593 qof.
Macalin Maxamuud: “Waxaan ka tanaasuleen maamulka siyaasadda Galmudug”
Cabdiraxman Cabdishakur: “Dagaalka Dhuusamareeb waxaa lagu galay Dambi Dagaal.”